စကားလုံး | November 2019
အရင်ကဆိုရင်များအတွက်သင်ခန်းစာများအတွက် Word 2016: ဖြေရှင်းချက်လူကြိုက်အများဆုံးတာဝန်များကို
နေ့သည်ကောင်းသော။ ယနေ့ပို့စ်အဆိုပါသင်ခန်းစာများကိုသစ်ကိုကိုစာသားအယ်ဒီတာ (သင်ကခေါ်နိုင်ပါတယ်လျှင်) တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်တာဝန်ဖျော်ဖြေအပေါ်အနည်းငယ်ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်လိမ့်မည် Microsoft Word ကို 2016 အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည် (ဆိုလိုသည်မှာကိုကူညီသောအဘို့သူတို့အားယူရန်ဆုံးဖြတ်သင်ခန်းစာများ၏ခေါင်းစဉ်များ။
တစ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းတစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုသွင်းထား
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌စာသားစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါတခါတရံကကီးဘုတ်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒီထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်အားလုံးအသုံးပြုသူများကပြုလုပ်အတွင်းပါရှိသောအထူးသင်္ကေတများနှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏အကြီးအစာကြည့်တိုက်သတိပြုမိကြသည်မဟုတ်။ သင်ခန်းစာများ: ကျနော်တို့ပြီးသားကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်စင်တီဂရိတ်ထားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်ဤဆောင်းပါးကိုတိုက်ရိုက်စာသားစာရွက်စာတမ်းတချို့ဇာတ်ကောင်ထည့်သွင်းအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ကိုးကားထားရန်ဘယ်လိုစစ်ဆေးမှတ်ထားနည်း။
က MS Word document အတွက်မှတ်စုများ Create
Microsoft Word ကိုမှတ်စုများ - တကြီးသူ့ကိုနှင့်တိဖြင့်အမှားတွေအပေါ်အသုံးပြုသူအကြောင်းကြားစာသားပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုထောက်ပြဖို့လမ်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်။ ဒါဟာစာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်နေစဉ်အစီအစဉ်၏ဒီ feature သုံးစွဲဖို့အထူးသဖြင့်အဆင်ပြေသည်။ သင်ခန်းစာကို: တရားစကားတော်မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှတ်စုများအတွက်အောက်ခြေမှတ်ချက်ထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုအမြတ်၌ထင်ရှားကြောင်းသီးခြားပူဖောင်းမှဆက်ပြောသည်။
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌အလုပ်လုပ်နေစဉ်, သင်မကြာခဏကြောင့်လိုအပ်သောပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့စာရွက်စာတမ်းသရုပျဖျောဖို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာရေးသားဖို့ဘယ်လောက်နဲ့စာသား၏ထိပ်ပေါ်မှာထားရန်မည်သို့မည်ပုံကျနော်တို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီပုံကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကပုံရိပ်တွေကိုလှည့်ပတ်စာသားစီးဆင်းမှုစေရန်လိုအပ်သောဖြစ်မည်အကြောင်းနည်းနည်းပိုခက်ခဲဆက်ပြောသည်ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုကောင်းသလိုကြည့်ပါတယ်။
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ပိုလျှံတစ်ခုသို့မဟုတ်အလွတ်စာမျက်နှာဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
အပို, အလွတ်စာမျက်နှာလည်းမရှိသည့်အတွက် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းအများစုမှာကိစ္စများတွင်ယခင်ကကိုယ်တိုင်ဖြည့်စွက်အချည်းနှီးသောအပိုဒ်, စာမျက်နှာအားလပ်ချိန်သို့မဟုတ်ကဏ္ဍများပါဝင်သည်။ ဒီအရာ, သင်သည်အနာဂတျတှငျအလုပျလုပျပရင်တာက print ထုတ်သို့မဟုတ်အလုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်နောက်ထပ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပေးစီစဉ်ဖို့ဖိုင်မြင့်မားမလိုလားအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌အသီးအသီးစာမျက်နှာပေါ်တွင်စားပွဲတစ်ခု header ကို Creating
သင်တစ်ဦး Microsoft Word ကိုစားပွဲပေါ်မှာကြီးမားသောဖန်တီးပါကကိုင်တွယ်လွယ်ကူမှုအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုစာမျက်နှာ၎င်းပြင်စာရွက်စာတမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဦးထုပ်တစ်ခုခင်းကျင်းပြသစေရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်လာမည့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ခေါင်းစဉ်များအလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း (တူညီဦးထုပ်) သတ်မှတ်ရန်လိုသည်။ သင်ခန်းစာကိုဘယ်လိုနှုတ်ကပတ်တော် table ထဲမှာတစ်နောက်ဆက်တွဲစေရန်ဒီတော့ဤစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပြီးသားရှိပါတယ်သို့မဟုတ်မကြာမီတစ်ဦးထက်ပိုစာမျက်နှာသိမ်းပိုက်တဲ့ကြီးမားတဲ့စားပွဲလည်းမရှိ။
တစ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းအတွက် frames များကိုဖယ်ရှားပါ
ကျနော်တို့ပြီးသားanice တစ်ဦးက MS Word document ထဲမှာဘောင်နှင့်မည်သို့လိုအပ်ပါကပြောင်းလဲထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့၏။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်၌ box ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အမည်ရ, ဘယ်လို, လုံးဝပြဿနာအကြောင်းကိုဆန့်ကျင်ဘက်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ စာရွက်စာတမ်းကနေ frame ရဲ့ဖယ်ရှားရေးဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ, သင်ကကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။
တစ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းအတွက် site တစ်ခုကနေ Copy ကူးဇယား
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ကျောက်ပြားကိုအတူလုပ်ကိုင်ဘို့ Tools များအလွန်အဆင်ပြေအကောင်အထည်ဖော်။ ဤသင်တန်း၏, Excel, သို့သော်ဖန်တီးပြုပြင်မွမ်းမံကျောက်ပြားကိုဤအစီအစဉ်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်, နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏနှင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီတော့ဥပမာ, နှုတ်ကပတ်တော်၌အချောစားပွဲကူးယူခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းအတွက်အခြားတည်နေရာ, သို့မဟုတ်ပင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော program တစ်ခုက paste ပါကခဲယဉ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Microsoft Word ကိုညီမျှခြင်း Editor ကိုဖွင့်
က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2010 က၎င်း၏ပစ်လွှတ်သည့်အချိန်တွင်တီထွင်မှုအတွက်ရတတ်၏။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို Processor ကို၏ developer များ "အလှကုန်ပစ္စည်းပြုပြင်ရေး" interface ကိုသာလုပ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာသို့ features အသစ်တွေအများကြီးမိတ်ဆက်ပေးရန်။ သူတွေထဲမှာလည်းပုံသေနည်းအယ်ဒီတာဖြစ်ခဲ့သည်။ အလားတူပစ္စည်းကိုရှေ့တော်၌ထိုအယ်ဒီတာအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အဲဒီနောက်ကသာသီးခြား Add-၌ရှိ၏ - မိုက်ကရိုဆော့ဖညီမျှခြင်း3။
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌အဖြစ်ရှုခင်းစာမျက်နှာတိမ်းညွတ်စေ
ဤစာအုပ် (က default အနေဖြင့်ထည့်သွင်း) နှင့် setting တွင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်သည့်ရှုခင်း - Microsoft Word ကိုများစွာသောအခြားပရိုဂရမ်၌ရှိသကဲ့သို့, နှစ်ခုစာမျက်နှာတိမ်းညွတ်အမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်အဘယ်သို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်တိမ်းညွတ်၏ကြင်နာ, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသင်လုပ်နေတာအလုပ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မကြာခဏစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒေါင်လိုက်တိမ်းညွတ်ထွက်ယူသွားတတ်၏, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင်စာရွက်ဖွင့်ဖို့ရှိသည်။
တစ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းများတွင်ရောမကိန်းဂဏန်းသတ်မှတ်ထားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, စာသားစာရွက်စာတမ်းများက MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြဿနာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်ရောမဂဏန်းထားရန်မည်သို့အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအထဲကပေါ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ စာစီစာကုံး, သုတေသနစာတမ်းများ, ဝေါဟာရကိုစာတမ်းများသို့မဟုတ်ဤအဖြစ်အခန်းကြီး marking နှင့်အရအေတှကျရာစုနှစ်ချထားရန်လိုအပ်သည်ဘယ်မှာမဆိုတခြားအလားတူထိုကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းများရေးသားတဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်မှန်သည်။
တစ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းအတွက်စာရေးသူ၏အမည်ပြောင်းလဲပါ
သငျသညျက MS နှုတ်ကပတ်တော်၌အသစ်တခုကစာသားစာရွက်စာတမ်းဖန်တီးအခါတိုင်း, program ကိုအလိုအလျှောက်ရေးသားသူရဲ့နာမကိုအမှီအပါအဝင်ဂုဏ်သတ္တိများတစ်အရေအတွက်, ထိုသို့တပ်ဆင်ပြီး။ အဆိုပါ "စာရေးသူ" ကိုပြတင်းပေါက် "န့်သတ်ချက်များ" (ယခင် "ဟုနှုတ်မြွက်တော် Options ကို") တွင်ပြသကြောင်းအသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာနေသူများကဖန်တီး။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူအကြောင်းကို, ထိုရရှိနိုင်သတင်းအချက်အလက် - ကလည်းပြင်ဆင်ချက်များနှင့်မှတ်ချက်များအတွက်ပြသပါလိမ့်မည်သည့်အမည်နှင့်အတိုကောက်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
နှုတ်ကပတ်တော် (2013, 2010, 2007) အတွက်လိုင်းအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဒီနေ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့သင်ခန်းစာအတွက်ငါသည်သင်နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်လိုင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သင်မည်သို့ပြသချင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖြေဆိုရန်ခက်ခဲကြောင်းတစ်မျှမျှတတဘုံမေးခွန်းဖြစ်ပါသည် ဒါကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လိုင်း၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုမှာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ငါကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများကိုဖန်တီးရန်4နည်းလမ်းတွေထွက်စေချင်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ဒါရဲ့ start ပါစေ ... 1 Method ကိုသငျသညျအခြို့သောစာသားကိုရေးသားခဲ့သည်နှငျ့သငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျတစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းအောက်သူတို့ကိုကိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုပါစို့။
က MS သမ်မာကမျြးစာသားကိုအယ်ဒီတာအတွက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်စာသားကို select လုပ်ဖို့အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတစ်ခုလုံးကိုစာရွက်စာတမ်းများ၏အကြောင်းအရာများကိုသို့မဟုတ်ယင်း၏အပိုင်းအစများအချို့ဖြစ်နိုင်သည်။ လူအများစုဟာအမြဲအဆင်ပြေမဟုတ်သောအရာ, ရိုးရှင်းစွာအဆုံးစာသားစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်ပုဒ်မ၏အစမှအ cursor ရွေ့လျားအသုံးပြုပုံမောက်နှင့်အတူကလုပ်နေတာ။
ကျနော်တို့က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ကွင်းခတ်ထား
Microsoft Word ကို text editor တစ်ခုကိုရုံးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒါလိုအပ်သောနီးပါးန့်အသတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို၎င်း၏အစုကိုအတွင်းရှိပါတယ်။ မကြာခဏဒီပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်ရှိသည်သူများသည်, တဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့ပရိယာယ်နှင့်အသုံးဝင်သော features တွေအနေနဲ့များစွာသောကျွမ်းကျင်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏအထူးစစ်ဆင်ရေးဖျော်ဖြေဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းမေးခွန်းများကိုရှိသည်။
တစ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းအတွက်နေရာစာမျက်နှာကိုပြောင်းလဲ
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါမကြာခဏကစာရွက်စာတမ်းအတွင်းအချို့သို့မဟုတ် data ကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။ သင်တစ်ဦးရှည်လျားသောစာရွက်စာတမ်းကိုသို့မဟုတ်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှစာသားထည့်သွင်းခြင်း, မရရှိနိုင်သတင်းအချက်အလက် structuring ၏သင်တန်းကြသောအခါအလွန်မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ပေါ်ပေါက်။
Microsoft Word ကိုအတွက်ဒီဂရီ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုသွင်းထား
က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစီအစဉ်လူသိများသည်အဖြစ်, သင်ကစာသားတွေနဲ့ဒါပေမယ့်လည်းကိန်းဂဏန်းဒေတာများနှင့်အတူမသာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်တောင်မှဒီဖြစ်နိုင်ခြေကန့်အသတ်မရှိ, သူတို့ထဲကအတော်များများကျနော်တို့ပြီးသားရေးထားပြီ။ သို့သော်နှုတ်ကပတ်တော်၌စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်တခါတရံဒီဂရီအတွက်အရေအတွက်ကရေးသားဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ, နံပါတ်များနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက်စကားပြော။
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ပေါင်းလဒ်၏လက္ခဏာသက်သေကိုထား
သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားသိကြသည့်အတိုင်း, Microsoft Word ကိုလိုအပ်ခဲ့လျှင်, သီးခြား menu ကနေတစ်ဆင့်စာရွက်စာတမ်းမှဆက်ပြောသည်နိုင်အထူးအက္ခရာများနှင့်သင်္ကေတတစ်ခုမျှမျှတတကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်, ကြှနျုပျတို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့, ဤဆောင်းပါးအတွက်ဘာသာရပ်သင်နှင့်အတူပိုပြီးအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ သင်ခန်းစာကို: က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌သင်္ကေတများနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်၌အထူးအက္ခရာများနှင့်သင်္ကေတများထည့်သွင်းခြင်းလည်း, သင်္ချာပုံသေနည်းနှင့်ညီမျှခြင်းအမျိုးမျိုးထည့်သွင်းအဆင်သင့်လုပ်တင်းပလိတ်များ အသုံးပြု. သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
က MS သမ်မာကမျြးစာသားကိုစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပြောင်းလဲ HTML ကို-file ကို
HTML ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိတဲ့စံချိန်စံညွှန်းမီ HyperText Markup Language ဖြစ်ပါတယ်။ World Wide Web ကိုပေါ်စာမကျြနှာအများစုဟာ HTML ကိုသို့မဟုတ် XHTML ကဖန်ဆင်း markup ဖော်ပြချက်, ဆံ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, များစွာသောအသုံးပြုသူများအခငျြးခငျြးက HTML-file ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်, မနည်းလူကြိုက်များနှင့်ဈေးကွက်စံ - Microsoft Word ကိုစာသားမစာရွက်စာတမ်း။
Microsoft Word ကို display ကိုကျောက်ဆူး Enable သို့မဟုတ် disable
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ကျောက်ဆူး - ကစာသားအတွက်ဘာသာရပ်ပြသတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြဘယ်မှာပြသထားတယ်နှင့်စာသားတွင်ဤအရာဝတ္ထုများ၏အပြုအမူတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့လင့်ချရန်မြို့ရိုးအကကို fix ဖို့ခွင့်ပြုသောရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများအတွက် frame ရဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်သည် loop တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။